Garaa Jabeenya TPLF Fi Biyya Arabaa - Caboowanci.com-Oromia
Garaa Jabeenya TPLF Fi Biyya Arabaa
May 18, 2016 Nadhani	1 Comment OMN.OLF, Oromia
Biyyoota Amanitaa hin qabinne keessaa AwwuuroophaniifAmeerkaanin akka mata dureetti fudhatamuu ykn ka’uu. Garuu as irrati kan gaafii guddaa ta’ee tokko biyyii Afrikaafii biyyii Arabaa kun Amanitaa isaanii jabeefachuu,tifkachuu fi leelisuu irrati moo adda dureedha. Egaa gaafiin inni guddaa eerga biyyii tokko Amanitaa kana bu’uureefatee ittis amanitee , ittin jiraatee fi ittin bulitee hundumaa irra caala namaaf kabaja guddaa tokko keenuufitu irra jira ture. Mee egaa biyya Awwuroophaafi biyya Arabaa kana wal bira qabaa ilaala. Biyya Ameerikaafii biyyaa Arabaa wal bira qabaa ilaala. Biyyii Arabaa kun Awwuroophaafii Ameerikaa irra caala qabeenya, diinagidee fi Amanitaa qabu. Garuu mirgi dhala namaa kan itti egamuufii itti tifkamuu biyyaa Amanitaa hin qabine biyya Awwurophaa fi Ameerikaa dhaa.
Kana kaasuun koo wa’ee shamaree Oromoo (Saamiyaa) biyya Arabaa ( Kuwait) keessati jiraataa isaanii ykn lamii isaanii jiraachisuuf jechaa, silumaayyuu hojatuu mana isanii, kan mana ququlleesituuf, nyaata qopheesituuf, daa’iima isanii guddisistuuf, bishaan buusitee hobaasituu, kan maqaa isaanii qabiduu, kan amanitaa isanii hordofituu, fi kan Afaanisanii dubatuu ykn hassofituu lammii Oromoo irrati du’a murteesanii otuu lubuun ishii jiru daawwaa dhaan akka ofi walaaltuu godhanii kalee ishii lachuu garaa jabinaan baafatani du’aaf ishii saaxilan.
Seena shamarree ( Saamiyaa) kunii akka mulidhisutti akkuma Oromoo kaanii accuucaan abbaa irree mootumaa Ethiopia saba keanya irraan gahamaa jiru ishiiniis wagaa Afur dura biyya ishii Oromia irraa akka baqattuu dirqiisiiffamitee. Akkuma oduu kana OMN irraa dhageenyeetti barumissa ishii eerga xumurtee booda hojjii argachuu hin dandeenyee biyya keessaa baqate. Wa’ee du’aatii ishii fi illee Emibbaasiin Ethiopia Kuwait jiru qoratee waan tokko gochuu hin barbaanne dubbii «sobaa hin haffarsiinaa « kan jedhuun deebisee.
Dhimmii kun akka fakkeenyaati ka’ee malee lubbuu lammii hedduutuu dhumatee keessaayyuu shamarran Oromoo irraa gahaa kan jiru fi kan ture lakkoofisa hin qabu. Wagaa ykn bara 2013 fi 2014 keessa namoota lammii Ethiopia fi lammii Oromoo 160,000 ta’aniitu huminaan dirqiisiifamanii biyyaa Saudi Arabia irra akka bineenisaa poolisii dhaan adamiffamanii biyyaa irrati deebifamaa fi kan mana hidhaati guuramaa turan. Biyyaa Arabaa gara garaa irrati moo ajjeechaafii rakkoon adda addaa kan namoota kana irrati raawwatamaa jiru xiqqaa mitti. Rabbii isinitti haa agarisiisuu namoonii kaan maqaadhuma Amanitaa kanaaf gara Makaa dhaafi deemanii sababa biraatiif moo biyyaa isaanitti deebi’uu hin dandenyee irrati akka Saree mandara keessa ykn saree batasikaana lixxe hariyyachaa ajjeechaadhaaf saaaxilanii Amanitaadhama isaanii illee jalaa busheesas gaafii keessa galchisiisa illee.
Dhugaa dubachuuf yoo ta’ee gochii ummanii Arabaa kun keessayyuu saba keenyaa irraan gahaa jiru gochaa ISIS godhuu irraa caala malee gad mitti. Silaayyuu ISIS kun yoo ati Amanitaa isaanii hordoofuu baatee morma si qala malee akkanumaan si hin qalu. Harkii 90 (% 90) biyya Araba kana keessa jiran namoota maqaa isanii qaban, namoota Amanitaa isanii hordofan fi Afaan isanii dubataniidha. Ulaagan kun yaada keesa utuu hin galiinii lamii keenyaa irrati ajjeechaa, hidhaa fi qaama isaanii tarsaasanii waan barbaadan keessa fudhatu. Kan bayyee moo nama gaddisiisuu torbaanuma lamaan kana keessa mormii namaa qalamee ykn irraa kutamee firiijii ummata Arabaa kana keessati argamuu isaatti.
Namoonii tokko tokko tarii kana jechuun kee Amaitaa hin qabiduu ykn waaee dhuunfaa mataa keetiifi Amanitaa kana waan hin jaalaneefi akkas jette jechuu ni dandeessu. Garuu ani jibiinisa amanitaa eyyuu fi jaalala amanitaa eyyuutuu hin qabu. Maqaa Amanitaa dhuma kanaan qabisoon kenyaa duuba irrati harkifamaa jira. Qabisoof Amanitaan wal duuka hin deemuu. Naminii Amanitaa ofi akka mataa isaa qofa ilaalatuu hubachuu dhiiseeti akka Amanitaan waloo ta’eeti Amanitoota kana babalidhisuudhaaf wal dorgomaa jira. Keessayyuu kan beekuu qabinnu amanitaa alaa nutti galee keessummaa nuuf ta’ee tokko Amanitaadhan bu’uureefatee gar gar wal qoodinne huminna wal dhoowwina. Kana jechuun koos wa’ee Amanitaa dubachuuf otuu hin taanee Oromumman haa dursuu jechuufi akka jibba ofi keessaa hin qabinne garuu qabissoo keessa wa’ee amanitaa hin calaqqisiifinne jechaafi. Kanaaf biyyii Amanitaa isaanii fudhanee du’aa keessaa fi rakkoo keessaa nu baasuu jennee itti baqanne nu bilisoomissuu dhiifinaan ykn du’a keessa nu baasuu dhiisinaan ija isaanitin nu ilaaluu hin barbadani. Kan rakkoo kana fakkaatuu kana keessaa of basuu danda’uufi of bilisoomisuu danda’uu numa Oromoo qofa malee dhaaba Amanitaafii biyyaa biraa miti. Yoo biyya qabaannee biyyaa biraatis hin baqannu. Yoo hin baqqanne ta’ee moo du’aafii rakkoo akkanaa kanaaf hin saaxilaminnu.
← TPLF Oromoo Dadhabisiisuuf Dhagaan Hin Fonqolchine Hin Jiru.
Caamsaan 20 TPLF Fi Dullachoota OPDO →
One thought on “Garaa Jabeenya TPLF Fi Biyya Arabaa”
dhugaadha yaannii kee .